State Counsellor explains Myanmar’s reforms at National University of Public Service, Hungary – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor explains Myanmar’s reforms at National University of Public Service, Hungary
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi arrived at the National University of Public Service in Hungary at 10 a.m. local standard time yesterday, where she was welcomed by Rector Dr. Andras Koltay and officials.
The State Counsellor then addressed an audience consisting of the rector, professors, staff and students of the university. She talked at length on Myanmar’s democratic transition process, efforts towards internal peace and national reconciliation, endeavours for implementing peace, stability and development in Rakhine State, initiating education reforms, bilateral cooperation between Myanmar and Hungary on education, and promoting interaction between the peoples of both countries.
Following this, the State Counsellor answered questions raised by the students and then handed over souvenirs to the rector.
Next, the State Counsellor travelled to the Hungarian Parliament Building where she met with Mrs. Márta Mátrai, First Officer of the National Assembly.
During the meeting, they exchanged similar experiences Myanmar and Hungary went through in their respective democratic transitions, discussed promoting cooperation between the parliaments of both countries and developing their skills.
Afterwards, the State Counsellor was treated toaluncheon hosted by Mr. Zsolt Németh, Chairman of the Foreign Relations Committee of the National Assembly.
From there, the State Counsellor attended the opening ceremony of the Hungary-Myanmar Business Forum held at the Marriott Hotel in Budapest and deliveredaspeech.
Next, the State Counsellor met with the Myanmar Ambassador, embassy staff and Myanmar scholars pursuing education in Hungary at the Kempinski Hotel.
Union Ministers U Thaung Tun and U Kyaw Tin, Ambassador U Myo Aye and officials also attended the meeting and the economic forum.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ National University of Public Service ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဟောပြောပို့ချ
(၆-၆-၂၀၁၉ ရက်၊ ဘူဒါပက်စ်မြို့)
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ဘူဒါပက်စ်မြို့၌ ရောက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ National University of Public Service သို့ရောက်ရှိရာ ပါမောက္ခချုပ် Dr. Andras koltay နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပါမောက္ခချုပ်၊ ပါမောက္ခများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ၊ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ မြန်မာ-ဟန်ဂေရီ နှစ်နိုင်ငံ ပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပြည်သူအချင်းချင်းထိတွေ့ဆံဆက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ် များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကျယ်တဝင့် ဟောပြောပို့ချသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသိလိုသည့် မေးခွန်းများအား ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က National University of Public Service ပါမောက္ခချုပ်အား အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်သည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော်သို့ရောက်ရှိပြီး ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mrs. Marta Matrai နှင့်တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် မြန်မာနှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံတို့အကြား ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုတွင် တူညီစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အချက်များအား အပြန်အလှန်ဖလှယ်ရေးကိစ္စ၊ နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော်အချင်းချင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် လွှတ်တော်များ၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံလွှတ်တော် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Zsolt Nemeth က တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်သည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘူဒါပက်စ်မြို့ရှိ Marriott ဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည့် မြန်မာ-ဟန်ဂေရီ နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးဖိုရမ်ဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် မြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့် သံရုံးဝန်ထမ်းများ၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရောက် မြန်မာပညာတော်သင်များအား ခေတ္တတည်းခိုနေသည့် Kempinski ဟိုတယ်၌ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲများနှင့် စီးပွားရေးဖိုရမ်ဖွင့်ပွဲတို့သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းနှင့် ဦးကျော်တင်၊ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးအေးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။